Ny minisitry ny fizahantany any Afrika atsimo hitsidika an'i Ghana
Home » Vaovao momba ny fizahan-tany any Afrika » Ny minisitry ny fizahantany any Afrika atsimo hitsidika an'i Ghana
Ny minisitry ny fizahantany afrikanina tatsimo, Mmamoloko Kubayi-Ngubane, dia amin'ny herinandro ho avy izao dia hanomboka amin'ny fitsidihana miasa any Ghana sy Nizeria.
Ny Minisitra dia handany roa andro ao amin'ny Accra hanatrika ny vondrona UNWTO ho an'ny filoham-pirenena momba ny asa lahasa amin'ny sehatry ny fizahan-tany miaraka amin'ny fifantohana amin'i Afrika, izay izy dia ho anisan'ny tontolon'ny adihevitra eo ambanin'ny lohahevitra "Politikan'ny fizahan-tany hahafahan'ny fitovian'ny miralenta"
Nampiantranoin'ny United Nations World Tourism Organization (UNWTO), ity forum ity dia hiady hevitra momba ny tolo-kevitra sy hetsika natao hiompana amin'ny fampiroboroboana ny fanomezam-pahefana vehivavy sy ny fitarihana any amin'ny faritra afrikanina, ao anatin'izany ny famatsiam-bola.
Antenaina ihany koa ny fivoriana amin'ny tatitra momba ny Global Report on Women in Tourism
Ny fizahan-tany dia iray amin'ireo sehatra toekarena manan-danja miaraka amin'ny fahafaha-mandray anjara amin'ny fitoviana lehibe kokoa sy ny fanamafisana orina ny vehivavy ary iray amin'ireo sehatra mitombo haingana indrindra manerantany amin'ny 10% amin'ny harin-karena faobe sy asa manerantany.
Hampiasa ny fotoanany any Ghana ihany koa ny Minisitra - toekarena faharoa lehibe indrindra any Afrika Andrefana - hifaneraserana amin'ireo mpandraharaha mpizahatany, media ary mpiara-miombon'antoka marobe amin'ny rojom-bidin'ny fizahan-tany.
Aorian'ny famaranana ny asa any Ghana dia hitarika delegasiona any Nizeria izy mandritra ny roa andro hifaneraserana amin'ireo mpiara-miombon'antoka amin'ny fizahantany sy ny varotra ary koa ny media.
Ilay sori-dalana, izay heverina ho firenena be mponina indrindra eto Afrika, dia hanome fotoana tambajotra sarobidy ary fotoana ahafahan'ny minisitra mametraka an'i Afrika atsimo ho toerana iray safidin'ny Afrikanina Andrefana izay te-hanao raharaham-barotra, fialam-boly ary hetsika hafa mifandraika amin'izany.
Amin'ny alàlan'ny fifampiraharahana amin'ireo mpiara-miombon'antoka fizahan-tany ao anatin'izany ny mpandraharaha fizahan-tany sy ny haino aman-jery, ny Minisitra dia hahazo fomba fijery tsara kokoa momba ny fomba ahafahan'ny indostrian'ny fizahantany any atsimo mandray tsara kokoa ny filan'ny mpandeha afrikanina Andrefana.
Ity dia ampahany amin'ny asa fampitomboana ny isan'ny mpizahatany iraisam-pirenena avy amin'ny kaontinanta sy izao tontolo izao.
Zava-dehibe indrindra izany satria ny indostrian'ny fizahantany any Afrika atsimo dia mamaly ny antson'ny filoham-pirenena hampiakatra avo roa heny ny 21 tapitrisa dolara amin'ny 2030.
Afrika Atsimo dia manolo-tena amin'ny fanamafisana ny fiaraha-miasa sy ny fiaraha-miasa amin'ny fiara izay hanampy amin'ny fifanakalozana kolontsaina matanjaka kokoa eo amin'ireo olona any amin'ireo firenena afrikana Andrefana roa ireo sy ny olona atsy Afrika atsimo.
The Birao fizahantany afrikanina mandray tsara ny fifanakalozana, fandrindrana ary fifandraisana eo amin'ireo mpitarika fizahantany afrikanina.